Amaqhinga ama-4 okucoca izixhobo zokucoca | IBezzia
Amaqhinga ama-4 okucoca izixhobo zokucoca
UToñy Torres | 22/07/2021 10:00 | Ikhaya
Ukucoca ikhaya, kusetyenziswa izixhobo ezahlukeneyo zokucoca, iiphedi zokukrwela, amalaphu, amalaphu nemitshayelo eluncedo kakhulu. Kodwa zonke ezo zixhobo ziqokelela iibhaktheriya kunye nenkunkuma ukuba azicocwanga, zisasazwa ngaphezulu kwekhaya. Ngokuqinisekileyo ngaphandle kwengxaki yezempilo kuphela, kodwa inokuba yingxaki yezempilo.
Kungenxa yoko le nto ezi zinto zifuna ukucocwa rhoqo. Kuphela emva koko, unokuqinisekisa ukuba ucoce indlu yakho ngokuchanekileyo. Kungenxa yokuba akuncedi nto ukwenza igumbi ngalinye licoceke, licoceke kwaye libulale iintsholongwane, ukuba usebenzisa izinto ezizele luthuli. Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungazihlamba njani ngokulula izixhobo zokucoca endlwini yakho, Qaphela ezi ngcebiso zilandelayo.
1 Ucoceka njani izixhobo zokucoca
1.1 Ucoca njani umtshayelo otshayelayo
1.2 Ukucoca i-mop
1.3 Iiponji kunye neescourere
1.4 Indlela yokucoca amalaphu namalaphu
2 Ukucoca izinto zokucoca, inxenye yenkqubo yezempilo
Ucoceka njani izixhobo zokucoca
Ukuba ungumthandi wabahlobo, uthotho lweethelevishini olusatsala abalandeli abatsha yonke imihla emva kweminyaka engama-20 emva kokukhutshwa kwayo, uyakukhumbula ukucoca ngokugqwesa, uMonica. Kwesinye seziqendu zokugqibela, lo mlinganiswa ucoca isicoci sakhe sokucoca kwaye usebenzisa esincinci ukucoca esikhulu. Isigwebo sakhe sokugqibela, Ndinqwenela ukuba kubekho encinci ukucoca oku.
Nangona ngelo xesha yayilelona binzana lihlekisayo kuninzi kolu luhlu, inyani kukuba ngaphandle kokugqitha, kubalulekile ukucoca isixhobo ngasinye. Xa usebenzisa isicoci se-vacuum kufuneka ukhuphe itanki, Ukongeza ekudluliseni ilaphu elifumileyo ngaphezulu kwamalungu alo.
Ngaba unokucinga ngokugcina isixhobo sokucoca uthuli, sigcwele uthuli, ekhabhathini? Akukho ngqiqweni, akunjalo. Ewe, okufanayo kuyenzeka ngayo yonke enye into. Ngala maculo ukucoca iingcingo, unokucoca izinto zakho zokucoca ngokukhawuleza, ngaphandle kokuzifaka endaweni yazo rhoqo.
Ucoca njani umtshayelo otshayelayo
Fumana ikama enamafutha okanye ibrashi endala, iya kukunceda ususe ubumdaka obuqokelelwe phakathi kweebristles zebrashi eshayelayo. Kamva, lungisa isitya esikhulu samanzi afudumeleyo kunye nesitshizi sesepha. Dipha umtshayelo kwaye uwuyeke uzike malunga nemizuzu engama-20. Ukugqiba, hlamba ngamanzi kwaye uyiyeke yome emoyeni kwaye ujonge ezantsi, ukuze i-bristles ingabi nakhubazeka.
Ubuncinane kanye emva kweeveki ezintathu kufuneka kwenziwe ukucoca i-mop. Kufuneka nje Gcwalisa i-emele ngamanzi afudumeleyo kunye nesicoci sokuthambisa igrisi, njengesixhobo sokuhlamba izitya. Vumela ukuba ithambe kangangesiqingatha seyure kwaye ukhuphe i-mop kakuhle. Yibuyisele kumanzi acocekileyo, kwaye udibanise i-mop amatyeli aliqela ukususa ukungcola nesepha.
Iiponji kunye neescourere
Iipads zokukrola ziqokelela inkunkuma yokutya enokubangela ibhaktheriya eyingozi empilweni. Zicoce kakuhle emva kokukhuhla, zinxibe cwina ngamanzi ashushu, isoda yokubhaka, kunye neviniga emhlophe yokucoca. Zicocekile kwaye zibulawe iintsholongwane.
Indlela yokucoca amalaphu namalaphu
Lungisa isitya ngamanzi afudumeleyo, ikomityi yesoda yokubhaka, enye yeviniga yokucoca emhlophe kunye nejusi yelamuni. Mayihlale ingene imizuzu engama-30, emva kwelo xesha, Hlikihla ilaphu ngalinye kakuhle, thambisa ngamanzi acocekileyo kwaye uvumele umoya wome. Ungazifaka kumatshini wokuhlamba, nangona kungacetyiswa ukuba udibanise amalaphu okucoca kunye neempahla, ke iya kuba ngumbane kunye neendleko zoqoqosho ezingeyomfuneko.
Ukucoca izinto zokucoca, inxenye yenkqubo yezempilo
Ukuba ukwenza umkhwa wakho ukucoca izixhobo zakho zokucoca emva kokusetyenziswa ngakunye, ungazigcina zicocekile ngendlela elula kakhulu. Ukuvumela ukungcola kuqokeleleke kukusasaza kuyo yonke indlu. Kodwa nokwenza nzima umsebenzi wokucoca kunye nokubulala iintsholongwane. Gcina indlu icocekile kwaye inentsholongwane ikunceda uzive ukhululekile kwaye wonwabe ekhayeni lakho.
Yongeza imizuzu embalwa kwinkqubo yakho yokucoca ukucoca izixhobo oyisebenzisileyo. Indlu yakho iya kucoca, uya kuziphepha iintsholongwane kunye nezinye iintsholongwane eziyingozi. Kwaye ke, uya kuba nakho ukonwaba kunye nekhaya elifanelekileyo lokuphumla kunye noxolo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Amaqhinga ama-4 okucoca izixhobo zokucoca
Iimboniso bhanyabhanya ezi-6 zokuzonwabisa ngo-Agasti
Ukutya oku-4 okuyingozi kakhulu ehlotyeni